5 Talooyin loogu talagalay ka-qaybgalka badan & nuxurka safarka ee calaamadeysan ee saamaynta leh | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/5 Talooyin loogu talagalay ka-qaybgalka badan iyo nuxurka safarka calaamadeysan ee saamaynta leh
5 Talooyin loogu talagalay ka-qaybgalka badan iyo nuxurka safarka calaamadeysan ee saamaynta leh
Mawduuca calaamadaysan waa erey si aad ah loogu dhex tuuray goobabada suuq-geynta, laakiin dad badan ayaa ku dhibtoonaya inay fahmaan macnaha dhabta ah.
Waxay u badan tahay inaad la kulantay oo aad ku hawlan tahay qaybo badan oo ka mid ah nuxurka summada ka hor adoon ogaanin, labadaba macaamil ahaan iyo xaalad xirfadeed.
Warshadaha socdaalka, gaar ahaan, waxyaabaha summadaha leh ayaa had iyo jeer loo adeegsadaa hab lagu rafcaansado tirokoobyada macaamiisha qaarkood kuwaas oo mudnaanta siinaya daacadnimada iyo qiyamka astaanta waxyaabaha gaarka ah ee ay bixinayaan.
Mawduucyada calaamadaysan waxay qaadan karaan qaabab iyo habab kala duwan oo kala duwan, taas oo macnaheedu yahay inay noqon karto mid dhib badan in la ogaado habka ugu wanaagsan ee looga dhigi karo mid xeeladaysan adiga.
Halganku halkan ayuu ku dhamaanayaa.
Waa maxay Nuxurka Summadda leh?
Si fudud u dhig, nuxurka summadaysan waa qayb kasta oo ka kooban oo dhista wacyiga sumadda iyada oo la xidhiidhinaysa shirkad qiyamka ay la xidhiidho.
Si aad si dhab ah u fahamto halka habkani ka yimid, waxaad u baahan tahay inaad fahamto macnaha guud ee uu ka soo baxay.
Xayeysiis dhaqameedku wuxuu ujeeddadiisu tahay iibinta shey ama khibrad asalkiisa. Hab kasta oo loo isticmaalo tan, inta badan way caddahay in macmiilku ka warqabo in si firfircoon looga iibinayo.
Qaar badan oo ka mid ah farsamooyinka loo isticmaalo suuqgeynta dhaqameed ayaa aad waxtar u leh, laakiin muuqaalka macaamiisha ayaa si weyn isu beddelay tobankii sano ee la soo dhaafay ama wax ka badan.
Macaamiisha suurtagalka ah ayaa caqli badan u leh hababka caadiga ah ee loo isticmaalo in lagu soo jiito dareenkooda oo si qarsoodi ah loo maareeyo habdhaqankooda, taas oo keentay kalsooni darada shirkadaha isticmaala hababka xayeysiiska ee cad si ay si cad ugu riixaan waxay iibinayaan.
Waxaa intaa dheer, waxa macaamiisha casriga ah ay ka rabaan noocyada ay taageeraan ayaa sidoo kale isbeddelay sannadihii ugu dambeeyay.
Dhab ahaantii, 83% millennials, gaar ahaan, waxay door bidaan inay lacagtooda ku bixiyaan alaabada ama khibradaha ganacsiyada kuwaas oo qiyamkoodu la socdo iyaga, oo ay si firfircoon u raadiyaan shirkado leh hadafyo ama hadafyo ay sidoo kale taageeraan.
Tani waxay si gaar ah u khusaysaa warshadaha safarka maadaama ay la jaanqaadayso welwelka macaamiisha badan ee ku aaddan saameynta bulsho ama deegaan ee fasaxooda.
Halkii laga raadin lahaa heshiisyada ugu jaban, macaamiil badan ayaa hadda mudnaanta siiya ballansashada safarrada calaamado wadaagaya mudnaanta marka ay timaado safarka.
Mawduuca calaamadeysan ayaa ah natiijada isbeddelladan muhiimka ah ee muuqaalka suuq-geynta.
Si aad u soo jiidato jiilka cusub ee macaamiisha, iyo si looga fogaado kalsooni-darrada la socota hababka xayeysiiska ee cad, nuxurka calaamaduhu wuxuu diiradda saarayaa abuurista dhammaan noocyada kala duwan ee nuxurka ay macaamiisha suurtagalka ah ku raaxaysan doonaan oo muujinaya qiimaha shirkadda, halkii ay bixin lahayd.
Tani waxay noqon kartaa muuqaalo, qoraalo blog ah, daabacado, iyo muuqaalo ay soo saartay sumad balse aan si toos ah ula xidhiidhin alaabteeda ama adeeggeeda.
Mawduucyada calaamadeysan waxay galaan mawduucyada ay macaamiishu xiisaynayaan si ay u soo jiitaan dareenkooda ka dibna waxay dhistaan ​​xidhiidh iyagoo si joogto ah u wadaagaya nuxurka kale ee xiisaha leh si ay calaamaddu u noqoto mid la mid ah qiyamka ama fikradaha wanaagsan qaarkood.
Faa'iidooyinka habkani waa cad yihiin: Waxyaabaha calaamadeysan waxay xoojiyaan sawirka astaanta, kaas oo kaa caawinaya inaad ka soocdo tartamayaashaada, wanaajiso xusuusta, oo kordhisa tirada macaamiisha suurtagalka ah ee maqla sumaddaada.
Beegsiga macaamiisha suurtagalka ah ee qiimahoodu la siman yahay astaantaada sidoo kale waxay la macno tahay in sicirka beddelka uu sareeyo iyo inaad aad ugu dhowdahay inaad hesho daacadnimada macmiilka ee muddada dheer.
Mawduuca calaamadeysan waa istaraatijiyad suuq-geyneed oo gudaha ah; waxay soo jiidataa macaamiisha cusub iyadoo diiradda saaraysa abuurista muuqaal soo jiidasho leh.
Waxaa jira wax badan oo isku dhafan oo leh farsamooyinka iyo qaababka kale ee suuq-geynta, taas oo sahlaysa in habkan lagu dhex daro qorshahaaga suuqgeyneed ee jira.
Waa in la ogaadaa in ereyga 'content branded' hadda sidoo kale loo isticmaalo in lagu tixraaco nooc ka mid ah habka suuq-geyneed ee iskaashiga ah ee shabakadaha warbaahinta bulshada sida Instagram, halkaas oo abuuruhu tilmaamayo in boostada la kafaala qaaday ama dhiirigeliyay lammaane ganacsi.
Suuqgeynta saamaynta leh waxay ku lug yeelan kartaa noocyo summad leh, laakiin maqaalkan, waxaan u isticmaalnaa ereyga si aan u tixraacno qaabka ballaaran ee abuurista nuxurka.
Sida Looga Sameeyo Waxyaabaha Sumcada leh ee Ganacsigaaga Safarka
Hadda, waxaad fahantay waxa loola jeedo ereyga summadaysan oo waxaad arki kartaa faa'iidooyinka qaadashada habka astaantaada safarka, waxaa laga yaabaa inaad ka tagtay inaad la yaabto sida fikradahan loo dhaqan geliyo.
1. Samee Qiimahaaga
Qiimaha shirkadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah samaynta sawirka sumadda gaarka ah. Iyagu waa ka badan yihiin yoolalkaaga ganacsi iyo dhaqankaaga.
Waxay qeexayaan noocyada khibradaha safarka ee aad bixiso, habka aad u wajahdo waxa ku jira suuqgeyn, habka aad u isticmaasho faa'iidadaada, iyo noocyada macaamiisha ku taageera.
Udub dhexaadka olole kasta oo calaamadeysan waa inuu ahaadaa waxa shirkaddaadu u taagan tahay iyo saameynta aad rabto inaad ku sameyso safarka adduunka iyo wixii ka dambeeya.
Dhammaan qodobka habkan suuqgeyntu waa in la muujiyo qiyamka summadaha ee ay dhegaystayaashu ka jawaabi doonaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad tan si toos ah u hesho ka hor intaadan aadin.
Haddii aad hore u leedahay go'an cad oo qiyamka shirkadda ah, cajiib ah. Aqoonso kuwa aad u malaynayso in dhagaystayaashu ay la xidhiidhi doonaan inta badan, oo halkaas ka tag.
Haddii aad dareento in qiyamkaagu maqan yahay, ka fikir arrimaha ama isbeddellada socdaalka iyo warshadaha dalxiiska ee aad danaynayso ama aad dareemayso inaad isbeddel ku samayn karto.
Shabakadda ballaadhisay oo ka fiirso arrimo bulsheed kasta oo aad u malaynayso in ganacsigaagu uu taageeri karo ama saamayn ku yeelan karo, oo ka fiirso haddii ay jirto hab aad kuwan uga shaqayn karto qiyamkaaga sidoo kale.
2. Aqoonso xiisaha dhagaystayaasha
Fahamka dhagaystayaasha aad u suuqgaynayso waa laf dhabarta nidaam kasta oo suuqgeyneed oo guuleysta. Nuxurka calaamadaysan maaha wax ka duwan.
Si kastaba ha ahaatee, halkii aad ka taaban lahayd waxa dhagaystayaashaadu ka rabaan shirkad socdaal, waxaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u baarto danaha iyo qiyamka tirakoobka kasta ee saldhigga macaamiishaada.
Xogta calaamadeysan waxay u shaqeysaa iyadoo soo jiidata dareenka macaamiisha suurtagalka ah ee doonaya waxa ganacsigaagu bixiyo, iyo dhisidda xiriir aamin ah iyaga oo u maraya macluumaadka aad wadaagto.
Si aad dareenkan u qabato marka hore, waxaad u baahan tahay inaad fikrad cad ka haysato waxa ay danaynayaan dhageystayaasha bartilmaameedka ah.
Tani waxay aad uga sii dheer tahay fahamka nooca fasaxyada ay ku raaxaystaan ​​iyo waxa ay raadiyaan si ay uga baxaan khibradaha safarka, inkastoo tani ay tahay mid faa'iido leh.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa danaha kale isku xidhaan ama la jaanqaadaan aqoonsigooda macaamil ahaan.
Waa maxay nooca hiwaayadaha ay ku raaxaystaan?
Maxay yihiin noocyada kale ee ay taageeraan?
Waa maxay qiimahooda?
Maxay yihiin arrimaha bulshada ay daneeyaan?
Maxay yihiin mawduucyada ay ku raaxaystaan ​​inay wax ka akhriyaan wakhtigooda firaaqada?
U buuxi cilmi-baaristan mid kasta oo ka mid ah kooxaha kala duwan ee ka kooban dhageystayaasha bartilmaameedka ah, inta badan ee qaybsan ayaa ka sii wanaagsan.
Kadibna, garto aagagga iyo mawduucyada qaar ka mid ah summadaada isku-daba-mareen, oo halkan ka billow dhiirigelinta nuxurka summadaysan.
Tusaale ahaan, waxaad tidhaahdaa inaad tahay astaan ​​socdaal oo ku takhasusay ciidaha fayoqabka ee meelaha kulaalale ah.
Dhageystayaasha aad beegsaneyso ayaa laga yaabaa inay dano guud ka leeyihiin waxyaabo ay ka mid yihiin cunno caafimaad leh, jimicsi, iyo feejignaan, iyo sidoo kale daryeesho saameyntooda deegaan ee meeraha, tusaale ahaan.
Summada safarka ahaan, macno kuma samaynayso inaad la wadaagto nuxurka bixinaya talo caafimaad ama nafaqo, laakiin waxaad abuuri kartaa nuxur ka hadlaysa waaritaanka safarka ama faa'iidooyinka waxqabadyada sida yoga ama ka-fiirsashada caafimaadka maskaxda.
Looma baahna in si cad diiradda loo saaro safarka calaamadeysan ee aad abuurto. Ilaa iyo inta ay la socoto qiyamka ganacsigaaga guud oo ay faa'iido u leedahay sawirka sumadda, waxay soo jiidan doontaa noocyada saxda ah ee macaamiisha.
3. Dooro qaababka caanka ah
Qayb muhiim ah oo ka mid ah xaqiijinta guusha marka ay timaaddo nuxurka summadaysan waa doorashada qaabka ay dhagaystayaashu bartilmaameedsanayaan.
Ma jirto wax macno ah oo aad ku kharash garayso qayb weyn oo miisaaniyadaada ka mid ah olole suuqgeyn muuqaal oo faahfaahsan haddii dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi ay runtii doorbidaan inay akhriyaan nuxurka halkii ay ka daawan lahaayeen.
Taas beddelkeeda, haddii macaamiishaada intooda badani ay ku raaxaystaan ​​​​waxyaabaha warbaahinta bulshada ee ka sarreeya dhammaan qaababka kale, abuurista daabacaad daabacaad meelna kuma heli doonto.
Mawduuca calaamadeysan ayaa sameeya saameyn weyn sababtoo ah waxay si dhab ah u dhexgelisaa oo ay xiisaysaa dadka arkaya, taasoo ku dhiirigelisa inay wadaagaan oo ay koraan gaaritaanka nuxurka.
Haddii aadan isticmaalin madal ama qaab ay dhageystayaashaadu ay yaqaaniin ama aad rabto inaad ku wadaagto nuxurka, ma heli doontid saameynta la rabo.
Muuqaal kale oo ka mid ah nuxurka calaamadeysan ayaa ah inay u janjeerto inay ka jawaabto isbeddellada caanka ah.
Ma jirto wax macno ah in la isku dayo in la abuuro wax khuseeya haddii dhagaystayaashaadu ay hore u lumiyeen xiisaha qaabka aad isticmaasho. Haddii aad doonayso inaad dhiirigelin ka qaadato waxa caanka ah, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad si degdeg ah u dhaqanto.
Tani waa mid ka mid ah qaybaha ugu fudud ee talooyinka suuq-geynta summada leh, laakiin waa qayb muhiim ah in habka looga dhigo mid u shaqeeyo astaantaada safarka.
Samee cilmi-baaristaada si aad u hubiso inaad abuurayso wax ay macaamiishu rabi doonaan inay la qabsadaan, ka dibna billow maskax-dhisidda.
4. Abuur nuxur Immersive
Mawduucyada calaamadeysan waxay raadiyaan inay soo jiitaan dareenka dadka oo ay saameyn ku yeeshaan, xitaa haddii aysan waligood la falgelin summadaada hadda ka hor.
Taabagelinta shucuurta macaamiisha waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee tan loo sameeyo, taas oo ah sababta abuurista waxyaabo summad leh ay u tahay hab wax ku ool ah.
Qaababka muuqaalka iyo maqalka ayaa si gaar ah ugu guulaysta summadaha safarka, maadaama ay isla markiiba u qaadi karaan macaamiisha suurtagalka ah meel cusub ama khibrad cusub.
Waa inaadan isticmaalin xeeladan si aad kor ugu qaaddo bixinta summadaada (ama ugu yaraan, maaha habkan suuq-geynta), laakiin taa beddelkeeda, diiradda saara samaynta waayo-aragnimo aad u mashquul badan, waxay ku sii jiri doontaa maskaxda macaamilka ka dib.
Adduunyada VR iyo xaqiiqada la kordhiyey ayaa furaya fursado ka badan sidii hore marka ay timaado nuxurka immersive, laakiin xitaa haddii aadan si fiican u haysanin miisaaniyada qaababka noocaas ah, waxaad weli si wax ku ool ah u xiri kartaa dhagaystayaashaada isla markiiba.
Tixgeli waxyaabaha maqalka ah ee si toos ah ula hadlaya dhegaystaha, qoraallada warbaahinta bulshada ee muuqaal-culus ee dhiirigeliya jahawareerka degdega ah, iyo qoraallo qani ah oo sharraxaad ah oo akhristahaagu aanu ku caawin karin balse uu ku lumo.
5. Noqo Mid Gaar ah
Waxaa jira tusaalooyin badan oo ku jira istaraatijiyad suuq-geyneed halkaas oo ay lacag ku bixiso si loogu ciyaaro si badbaado leh.
Waxyaabaha calaamadaysan maaha mid ka mid ah kuwan.
Dhab ahaantii Tani waa waqtigii la samayn lahaa shay qalafsan oo hal abuur leh kaas oo heli doona in la dareemo astaantaada lana wadaago macluumaadkaaga.
Wadashaqeyn lala yeesho sumad lama filaan ah oo ku saabsan qoraallo xiriir ah oo warbaahinta bulshada ah? Jawaab ku saabsan mowduuc kulul oo si cad u muujinaya mowqifkaaga arrinta? Ma u galaysaa qaab aan caadi ahayn, sida soo saarista muqaal muusig?
Tusaalooyinka ugu wanaagsan ee nuxurka calaamadeysan waa kuwa fayras galay, badanaa sababtoo ah dabeecadooda gaarka ah ama lama filaanka ah.
Xiriirinta qiyamkaaga waa muhiim, laakiin waxaad u baahan tahay inaad marka hore soo qabato dareenka macaamiisha si ay dhab ahaantii u dhegaystaan ​​waxaad sheegayso.
Haddii ay jirtay waligeed wakhti aad halis geli lahayd oo aad isku daydo wax cusub, kani waa kan.
Waxaa suurtogal ah in ganacsigaaga socdaalku uu suulka lugtiisa geliyey biyaha nuxurka leh, ama waxaad raadinaysay natiijooyin isku mid ah dadaalkaaga suuqgeyneed adigoon garanaynin ereyga farsamada ee waxaad samaynayso.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad guud ahaan ku cusub tahay habkan, xaaladdaas oo ay ahayd in maqaalkani uu fikrad fiican ku siiyo hababka ugu fiican ee macluumaadka summadaysan kuugu shaqayn karo qaybta socdaalka.
Dabeecada nuxurka calaamadeysan waxay u badan tahay inay isbedelaan sanadaha soo socda si looga jawaabo isbedbeddelka danaha macaamiisha iyo mudnaanta, iyo sidoo kale soo bandhigida farsamooyinka suuq-geynta cusub.
Waxa aan suurtogal ahayn in la beddelo si kastaba ha ahaatee waa saamaynta togan ee kor u qaadida astaantaada adiga oo helaya meel ay wadaagaan dhageystayaasha bartilmaameedka ah, taasoo horseedaysa heerar sare oo ka-qaybgalka macaamiisha, kalsoonida, iyo daacadnimada.
6 nooc oo kugu dhiirigelin doona inaad abuurto wax ka wanaagsan
10-ka Faa'iido ee Ganacsi ee ugu Sarreysa ee Suuqgeynta Macluumaadka
Suuqgeynta Macluumaadka: Hagaha Bilowga ugu dambeeya
Sawirka Muuqda: GaudiLab/Shutterstock
Sida Loo Daabaco Podcast-kaaga
Sida Loo Isticmaalo Amazon Sifeynta & Barnaamijyada Gunnada Gudbinta Calaamadaha